Ndị na-emepụta mgbapụta dị elu - China High lift pump pump suppliers & Factory
Main oru atụmatụ na ngwa: Na oge a na CAD imewe usoro, o nwere magburu onwe haịdrọlik arụmọrụ, elu arụmọrụ na ala na-eyi ọnụego. The eruba Itie bụ capacious, mgbochi-egbochi arụmọrụ dị mma, cavitation arụmọrụ bụ elu; Jikọtara akara na n'ibu akara na inyeaka impeller na mbukota na nakweere iji hụ na ọ dịghị leakage nke slurry. Tụkwasị obi imewe ana achi achi na pụtara-enweghị ntụpọ-arụ ọrụ oge (MTBF) nke dum igwe na-ukwuu mma. Jiri obere mmanu ...
Nnukwu mgbapụta 300ZGB